Semalt: Indlela yokuLahla u-Blackhatworth uMthumeleli we-Spam kwi-Google Analytics
Abo, abayaziyo ukuthunyelwa kogaxekile, yiqonda indlela ekukhathazeka ngayo xa ifika kwi-Google Analytics yakho. Ingxelo yokuthumela i-spam yokungena ngaphakathi kwe-GA iingxelo sele ikhulile kwiminyaka yamuva. Ukuba ungumnikazi wewebhusayithi, kufuneka ukwazi indlela yokujongana nayo ukuze ugweme imiphumo emibi enokuyenza kwi shishini lakho.
I-Blackhatworth.com yenye yeentambo zokuthunyelwa ezinabaphathi abaninzi beendawo kunye nabaphathi abavuna iintloko zabo. Yisayithi ekuthumelela i-traffic tragus okanye "i-fake hits" kwaye izizathu zokwenza njalo ziyahluka - räumung zürich. Amanye ama-spam okuthunyelwa ahloselwe ukutsala iindwendwe kwiindawo zabo. Bayazi ukuba kukho iisayithi ezishicilela uluhlu lwababhenxisi babo abaphezulu. Izithuba ze-spamming zinethemba lokufumana iindwendwe ngenxa yokuba zivele kwiintlobo ezinjalo. Ezi zayithi zibuye zenze iibhanki ngentshisekelo yabaphathi beendawo. Bathemba ukuba xa bakugaxekile, uya kufuna ukwazi ukuba kutheni badibanisa nawe. Uya kutyelela indawo yabo ukujonga, kwaye yiyo kanye into ayifunayo - ithrafikhi.
UJack Miller, ochwephephambili ophezulu Semalt , ubonakalisa apha iindlela zokwahlula olu hlobo logaxekile logalelo.
Ngaba i-Blackhatworth.com idlulisela ugaxekile logaxekile?
Nangona ukuthunyelwa kogaxekile kungabonakala kungenakubungozi kuba kungabandakanywa nezenzo ezinobungozi ezifana nokusabalalisa i-malware, kuyinkalo ebalulekileyo kuba ichaphazela idatha yakho ye-GA.
Ingxaki eyenziwa ngokuthunyelwa kogaxekile kukuba ihlaziya idatha yakho ye-analytics yewebhu. Idatha yakho ihlawulelwe kwaye ihluleka ukunika i-metrics echanekileyo yendlela ejoliswe kwiwebhusayithi yakho. Izigqibo ezenziwe ngokusebenzisa le data engalunganga zingaba yingozi nakakhulu kunokuba zi luncedo kwishishini. Ngelishwa, abantu abangaqapheli ukuthunyelwa kogaxekile benza njalo kwaye bayazibuza ukuba kutheni izicwangciso zabo ze-SEO zingasebenzi njengoko kulindeleke.
Ukurhoxisa i-Blackhatworth.com Ukuhanjiswa kogaxekile kwi-Google Analytics
Ukuseta iifayile zokuthunyelwa kogaxekile ku-GA yenye yeendlela ezichanekileyo zokukrazula i-traffic yezithuthi kwiindawo zokugawula. Izihlungi zinyamekela iziza ezithumela i-fake traffic ku-GA ngqo kunye nalabo abasebenzisa i-bots ukutyelela indawo yakho.
Ngena kwi-akhawunti yakho ye-GA kunye ne-View View down, cofa Yakha umboniso omtsha uze unike igama.
Yenza icebo elitsha ngokuchofoza iifayile> Uhlu olutsha. Gama igama elitsha lokuhlunga 'blackhatworth.com lihle'.
Emva kokukhetha uhlobo lwefayili yenkcubeko, nqakraza ukungabikho kunye nokuhla kweNdawo yokuHlahla kweMifanekiso khetha uReferral.
Kwifayile yefayile yefayile, faka i-blackhatworth \_ .com uze ulondoloze izicwangciso zakho.
Unokwenza oku nakwezinye iindawo zokuthunyelwa kogaxekile ezingabonakala kwiingxelo zakho ze-GA. Qinisekisa ukuba ngaphambi kokucoca nayiphina i-domain kuqala uhlolisise ukuba uqinisekise ukuba ngowona u-spam umthumeleli. Awufuni ukucoca iziza ezingokoqobo kwaye ulahlekelwe ngephutha yangempela ngephutha.